Ikhaya lanamhlanje elisemaphandleni kumgama oyi-1km ukusuka kwi-SH1. - I-Airbnb
Ikhaya lanamhlanje elisemaphandleni kumgama oyi-1km ukusuka kwi-SH1.
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguLeonie
SITHANDA UGONWE KWAYE ULANDE IZIKHOKELO ZOKUKHUSELEKA KWE-COVID
Indlu yethu yangoku, i-18km ukusuka e-Picton, i-10km ukusuka e-Blenheim, zizakhiwo ezi-3 ze-octagonal. Igumbi lokuhlambela leendwendwe. Igumbi lakho lifumana ilanga lasekuseni. Iinketho zokuzonwabisa zangaphakathi nangaphandle kunye nelanga okanye umthunzi. I-WiFi yasimahla. Siku-5km ukusuka elwandle kunye ne-1km ukusuka kwi-SH1 phakathi kwePicton neBlenheim. Kufuphi nezidiliya kunye neendlela zokuhamba. Ubusuku obunye bokuhlala abukho ixesha elide ngokwaneleyo ukuxabisa into enokubonelela ngommandla wethu
IMarlborough lelona phondo laseNew Zealand elinelanga
Abantwana bethu sele bephumile, ngoko ke wamkelekile ukuba uhlale iintsuku ezimbalwa. Isilumkiso: indlu ikwilizwe, ingqongwe zizilwanyana (iintaka, amathole ama-2, inkukhu kunye nempuku ngamaxesha athile)
Sinenja uLouie ehlala eholweni. Nceda uze nokutya kwakho (isidlo sangokuhlwa / isidlo sakusasa). Asingobacoci abachwepheshile okanye abalimi (njengoko kubonisiwe kumaxabiso). Siyazithanda iindwendwe ezonwabele ubomi ngokugqibeleleyo kwaye zingachithi iintsuku zazo zicoca kwaye zicocwe.
4.53 · Izimvo eziyi-79
Akukho xinzelelo lokupaka, akukho zibane zendlela, umoya ococekileyo, ilanga elihle liphuma kunye nokutshona kwelanga, ukubunjwa kwamafu amahle, imithi, iintaka kunye nokuzola.
Sihlale eMarlborough ukusukela ngo-1988 kwaye kufuneka sikwazi ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo ukuchitha iintsuku ezimbalwa ezingenakulibaleka zolonwabo.
Ndijonge phambili ukukwamkela!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tuamarina